Google My Business: စာရင်းပြုစုခြင်းအတွက် Dutchtown လမ်းညွှန်• DutchtownSTL.org
Google My Business - စာရင်းပြုစုခြင်းအတွက် Dutchtown လမ်းညွှန်
အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေး google စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Google တွင်စာရင်းသွင်းရန်နှင့်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များမြင်သည့်အရာကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်သင့်အားအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မှုသေချာစေရန်နှင့်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင့်အားလမ်းလျှောက်ပါမည်။ ထိုအဟုတ်, ဒါအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
သင်ဖောက်သည်များရောက်ရှိချင်သောအခါ ဒိန်းမတ် နောက်ပြီး Google ကိုမြင်ရဖို့လိုပါတယ် ဒီနေ့ခေတ်လူအများစုကဂူဂဲလ်ကိုအရာရာတိုင်းကိုပဲ ဦး စားပေးရှာကြသည်၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ကစျေးဆိုင်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အနီးအနားတွင်စားရန်တစ်နေရာရာမှာရှာသောအခါ။ သင်ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်လေ၊ ဂူဂဲလ်သည်လူများကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ညွှန်ကြားနိုင်လေလေဖြစ်သည်။
DutchtownSTL သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်များသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Dutchtown ရဲ့ကော်မတီများ: မြှင့်တင်ရေးကော်မတီနှင့်စီးပွားရေးတက်ကြွကော်မတီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်မတီများတွင်ပါဝင်ရန်၊ Dutchtownstl.org/committees.
Dutchtown အသေးစားစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး.
Google My Business Video လမ်းညွှန်
Dutchtown နေထိုင်သူနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင် Janessa West သည်သင်၏စီးပွားရေးကို Google My Business တွင်စာရင်းဝင်ရန်ဗီဒီယိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ သူမသည်သူမအတွက်စာရင်းပြုစုသည် စိန့်လူးဝစ်မိုဘိုင်း notary ဝန်ဆောင်မှုဂူဂဲလ်တွင်တည်ဆောက်ရန်အဆင့်အားလုံးကိုပြသသည်။ ဗီဒီယိုတွင်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များပါရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်မှ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စိန့်လူးဝစ္စဒေသ၏ကျယ်ပြန့်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်မိုဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်လျှင်အထူးတန်ဖိုးရှိသည်။
ဂူဂဲလ် My Business လမ်းလျှောက်မှုအဆင့်ဆင့်
အကယ်၍ ဗီဒီယိုများသည်သင်၏အရာနှင့်မကိုက်ညီပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ Google My Business ပရိုဖိုင်ကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကဲ့သို့အုတ်နှင့်အင်္ဂတေလုပ်ငန်းအတွက်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်တဖန်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သောအကြံပြုချက်များများစွာရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်လျှောက်လိုက်နာပါ
စတင်ရန်သွားပါ google.com/business ပြီးရင် Manage Now ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုဆိုင်းအင်မ ၀ င်ပါကဆိုင်းအင်လုပ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင့်တွင်ဂူဂဲလ်အကောင့်မရှိသေးလျှင် (ဥပမာဂျီမေးလ်အတွက်)၊ sign up လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဂူဂဲလ်တွင်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကသူတို့ကိုမပြောဘဲတောင်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးအကြောင်းများစွာသိသည်။ သင်၏စီးပွားရေးနာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးပေါ်လာမလားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းထဲတွင်သင်ရောက်ရှိနေပါကဆိုလိုသည်မှာဂူဂဲလ်သည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့ကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အသုံးပြုသူများ၏ပံ့ပိုးမှုများသို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူရန်နှင့်၎င်းသည်တိကျမှန်ကန်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သင်၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်တွင်မတွေ့ပါကသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဂူးဂဲလ်အားအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက် South Side Snack ဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့စတိုးဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်တော့မယ်။ သင်၏စီးပွားရေးအမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပြီးသင့်စီးပွားရေးကိုအမျိုးအစားတစ်ခုသတ်မှတ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ မည်သည့်အမျိုးအစားကိုသင်၏စီးပွားရေးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးအမျိုးအစားကိုစတင်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်ဂူဂဲလ်ကအကြံပြုချက်များစတင်လိမ့်မည်။ သင်ဒီမှာတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာလုပ်ရမည်၊ သင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ရှေ့သို့ Next ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာကိုထည့်ချင်ပါသလားဟု Google ကမေးလိမ့်မည်။ သင်သည်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်လီစတိုးဆိုင်တစ်ခုကဲ့သို့အုတ်နှင့်မော်တာဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုလည်ပတ်နေလျှင်သို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးသန့်နေရာတစ်ခုကိုသင်ကမ်းလှမ်းပါကရှေ့သို့သွားပြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏လိပ်စာအချက်အလက်၊ နာရီနှင့်အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသူတို့၏အိမ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိလူများထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှင်၊
ရှေ့ဆက်သွားပါ။ သင်၏စီးပွားရေးတည်နေရာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်အတုဖြစ်သော South Side Snack ဆိုင်သည်အထဲ၌အဆင်ပြေစွာတည်ရှိလိမ့်မည် အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်အစေခံရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ကော်မတီဝင်များ.
သင်၏လိပ်စာကိုစတင်ရိုက်ထည့်သောအခါသင်၏လိပ်စာမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်စနစ်တကျပေါ်လာစေရန်ဂူဂဲလ်ကသင့်ကိုအကြံပြုလိမ့်မည် Google Maps ကို။ Google Maps တွင်ပြသခြင်းသည်ခြေလျင်လမ်းကြောင်းရှာဖွေနေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က“ ကျွန်ုပ်အနားတွင်ရှိသောအရောင်းဆိုင်များကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်း” သို့မဟုတ်“ Dutchtown ရှိစားသောက်ဆိုင်များ” ကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဂူဂဲလ်၏အမြင့်ဆုံးထိပ်နားတွင်ရှိသောမြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ယခုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များသည်ဤမြေပုံကိုဆွဲထုတ်။ အနီးအနားရှိအရာအတိအကျကိုကြည့်နိုင်သည်။ သင်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပေးလေ၊ သင်ကြီးထွားလေလေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု ပို၍ များလေလေပိုမိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
နောက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကသင်သည်သင်၏အုတ်နှင့်မော်တာတည်နေရာပြင်ပရှိဖောက်သည်များကိုသင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်ဆိုပါကသင်အားဂူဂဲလ်ကိုပြောပြခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါကဤနေရာတွင် Yes ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီဥပမာအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မရွေးကိုရွေးချယ်ပါမယ်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်၏နံရံလေးခုထက်ကျော်လွန်သောဖောက်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဤအရာကိုပြန်ပြီးသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်သင်နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်လိုကြသည်။ နောက်မျက်နှာပြင်တွင်သင့်အားအခြေခံဖုန်းနံပါတ်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အခြေခံကျသောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တောင်းရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိပါကသင်ဒီမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတစ်ခုခုနှင့်လင့်ခ်တစ်ခုထည့်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်ငယ်လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဂူဂဲလ်ကလည်းကူညီနိုင်သည်။ sol AztecaDutchtown ရှိ South Broadway တွင်တည်ရှိပြီး၊ Sol Azteca ၏ Google ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပါ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုစိတ်ကူးတစ်ခုရရန်။ နောက်လာမည့်လမ်းညွှန်တွင်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုဆွေးနွေးပါမည်။
သင်ရုံ set up ရတဲ့ပြီးပြီ! ဂူဂဲလ်ကသင်“ သိထားချင်တာလား” ဟုမေးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဂူဂဲလ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုအီးမေးလ်များနှင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုမည်သို့တိုးတက်စေမည့်အကြံပြုချက်များကိုဆိုလိုသည်။ လအနည်းငယ်အီးမေးလ်အနည်းငယ်ရဖို့စိတ်မပူရင်ဒီ option ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူး။
ယခုမှာသင်သည်စာရင်းဝင်နေပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကို Google My Business တွင်ရယူရန်အတွက်ပထမခြေလှမ်းသာဖြစ်သည်။ သင်သည်၎င်းကိုတစ်ကြိမ်သာတာဝန်အဖြစ်ချဉ်းကပ်နိုင်သော်လည်းသင်၏စာရင်းကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်ထိတွေ့မှုရှိစေရန်သင်၏ဂူဂဲလ်ပရိုဖိုင်းကိုသာကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ပရိုဖိုင်အားမည်ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
သင်၏ Google My Business Profile ကိုစီမံခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ဂူဂဲလ် My Business ပရိုဖိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်အလုပ်များနေပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သော်လည်း၊ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုယခုနှင့်အနာဂတ်တွင်အချိန်ပိုယူရန်သေချာသည်။ တနည်းကား၊ ဤသူကားအဘယ်သူနည်း။
ဂူဂဲလ်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်စာရင်းသွင်းရန်အထက်ပါအဆင့်များပြီးသည်နှင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ကူညီရန်အပိုအချက်အလက်အချို့ပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်၏ Google My Business dashboard မှအမြဲတမ်းရယူနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အပိုထိတွေ့မှုများထည့်ပါ။ ပိုမိုပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းသည်ဖောက်သည်များမှသင်၏လုပ်ငန်းအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခြုံငုံသုံးသပ်မှုကိုပြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အုတ်နှင့်မော်တာတည်နေရာကိုဖွင့်ထားပါက (သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင့်ကိုဖောက်သည်များကတစ်နေ့လုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပြုလိုလျှင်) သင်သည်သင်၏အလုပ်ချိန်ကိုဝင်နိုင်သည်။ South Side ရေခဲမုန့်ဆိုင်၌ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အလုပ်များနေပြီးကတည်းကအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည် ဒိန်းမတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းများအတွက်ရက်စွဲအထိ။ သင်၏နာရီကိုလိုအပ်သလိုထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏အချိန်ကိုထည့်သွင်းသောအခါဂူဂဲလ်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ပိတ်ထားလျှင်ဖြစ်စေ၊ နောက်တစ်ခုဖွင့်လျှင်ဖြစ်စေသင့်ဖောက်သည်များအားပြောနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏စီးပွားရေးနေ့စတင်ချိန်တွင်သင်“ မကြာမီဖွင့်လှစ်” မည့်အထောက်အကူပြုအကြံဥာဏ်များကိုပင်ပေးလိမ့်မည်။
နောက်ပြီး၊ မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖော်ပြချက်တစ်ခုပေးချင်တယ်။ သင်တိုတောင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်ဂူဂဲလ်ကသင့်အားပေးသောအက္ခရာ ၇၅၀ လုံးကိုသုံးရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ ဤသည်မှာသင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းမှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောရုံသာမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုထပ်ပြောပါ
Dutchtown Diner သည်အမေရိကန်ဂန္ထဝင်အစားအစာများကိုဘာဂါ၊ အသားညှပ်ပေါင်နှင့်အသုပ်များပါဝင်သည်။ ငါတို့ Triple Turkey ကလပ်အတွက်လူသိများတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့နှစ်သက်တဲ့ရိုးရာနှစ်ဖက်၊ သင်ဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့နိုင်မယ့်ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဘာဂါ၊ အရည်ပျော်မှုနှင့်ထုပ်ပိုးမှုများစွာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမဲသား၊ ဝက်သားထင်းနှင့်ငါတို့ကျော်ကြားသောကြက်သားကဲ့သို့သောဟင်းလျာများအပါအဝင်နေ့စဉ်အပိုအထူးအစီအစဉ်များကိုပေးသည်။ ငါတို့မှာအရသာရှိသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊
စားသုံးသူတိုင်းကိုနှစ်သက်၊ စားသောက်ရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ညစာစားရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကျေနပ်သည်။ ဒီနေ့ Dutchtown Diner ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာသိကျွမ်းစေသည်။ သင်၏အလားအလာရှိသောနာယကများသည်“ စားသောက်ဆိုင်” တစ်ခုကိုရှာချင်မှရှာချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသော့ချက်စာလုံးများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်သင့်ကိုရှာတွေ့နိုင်စေရန်သေချာစေပါ။
Rhonda's Resale ဆိုင်သည်ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရွယ်အစား၊ စတိုင်အမျိုးမျိုးရှိသောအမျိုးသမီးများအတွက် ၀ တ်စုံများ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီများ၊ တီရှပ်များ၊
သင်မြို့ပေါ်ရှိညတစ်ညအတွက်အဝတ်အစားတစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ ensemble ကိုဖြည့်စွက်ရန်အကောင်းဆုံးသောလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ Rhonda's Resale ဆိုင်၌သင့်အတွက်တစ်ခုခုထည့်သွင်းရန်သေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းအသစ်များကိုအဆက်မပြတ် ၀ င်ရောက်နေသောကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များနှင့်လတ်ဆတ်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထံမကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်ရန်သေချာစေပါ။
ငါတို့မှာစတိုင်တိုင်းနဲ့ရာသီတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂန္ထဝင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဝတ်အထည်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ညနေခင်းဝတ်ရုံများအတွက် Rhonda's သို့လာရောက်ပါ။
Gonzalez Contract သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏လှပသောအိမ်ဟောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည့်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များ၊ အသေးစားပြင်ဆင်မှုများမှအပြည့်အဝပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်သင်၏သမိုင်းဝင်အိမ်ကိုအလှအပနှင့်အရောင်တောက်ပစေသည်။ သင့်ရဲ့ tuckpointing နှင့်အုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်ချက်များအားလုံးအဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။ ဒေသခံသမိုင်းဝင်အဆောက်အ ဦး စည်းမျဉ်းများအရအလှဆင်ထားသောဗိသုကာနှင့်သမိုင်းဝင်ပြတင်းပေါက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းတို့လည်းပြုလုပ်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဟင်းလင်းပြင်သို့မဟုတ်ကုန်းပတ်အစီအစဉ်များ၊ သင်၏မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများသို့မဟုတ်အိမ်ပတ်ပတ်လည်အခြားစီမံကိန်းများနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ အခမဲ့ခန့်မှန်းချက်နှင့်ရည်ညွှန်းများအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၏မျက်လုံးကိုအမှန်တကယ်မြင်ချင်လျှင်သင်၏ပရိုဖိုင်းတွင်အချို့ဓာတ်ပုံများထည့်ရန်သေချာစေပါ။ ဓာတ်ပုံများသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစကားလုံးများထက်ပိုမိုပြသသည်၊ ၎င်းတို့သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိသည်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းအောင်နှစ်ခြိုက်အောင်ကြိုးစားပါ။ သင်ကအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆရာမဟုတ်လျှင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးနိုင်သည့်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ကိုမေးပါ။
စားသောက်ဆိုင်များ - သင်၏ထမင်းစားခန်း (အချည်းနှီးသို့မဟုတ်အလုအယက်ဖြစ်နေစဉ်)၊ သင်သို့မဟုတ်သင့်သန့်ရှင်းပြီးစနစ်ကျသည့်မီးဖိုချောင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောစားဖိုမှူး၊ ဂရုစိုက်ထားသောပန်းကန်များ၊
စျေးဝယ်ခြင်း - သင်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း (ဖောက်သည်များကသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအဆင်ပြေစေရန်သေချာစေပါ)၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များသို့မဟုတ်သင်၏ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသည့်ဆိုင်ကိုပြသသည့်သင်၏စတိုးဆိုင်၏အတွင်းပိုင်း။
၀ န်ဆောင်မှုများ - သင်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပြီး၊ သင်၏လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကိုပြသနေသည့်တိုးတက်မှုများနှင့်ပြီးဆုံးသွားသောစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ငန်းရှေ့တွင်ရပ်နေသည်။
သင့်ဓာတ်ပုံများ၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သင့်ဖောက်သည်များအပါအ ၀ င်သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနာယကများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သင်အွန်လိုင်းတင်သည့်ဓါတ်ပုံများတွင်ပါသောမည်သူမဆို၏ခွင့်ပြုချက်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင် Set up လုပ်ပြီ
မင်းရဲ့ Google My Business profile ကိုပြီးပါပြီ။ သင်၏စီးပွားရေးကိုဂူဂဲလ်တွင်ပေါ်လာသောအခါလူအများမြင်သောအရာကိုယခုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်ယခုကွန်ပျူတာမှထွက်ခွာနိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်၊ သင်သည်သင်၏လော့အင်ကိုဝင်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် Google My Business ဒိုင်ခွက် အခါအားလျော်စွာ သွားပါ business.google.com သင့်ရဲ့ dashboard ကိုဝင်ရောက်ဖို့။ လတ်ဆတ်သောဓာတ်ပုံများထပ်မံထည့်ပါ၊ သင်၏နာရီနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုတုံ့ပြန်ပါ။
အဆိုပါ ကျွန်ုပ်၏ Dutchtown လမ်းညွှန်၏ဒုတိယပိုင်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသက်ရှင်ပြီ အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် ထပ်မံ၍ သွားပါ၊ သုံးစွဲသူများကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်း။ အသစ်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထားပါ။
နေခြည် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown ကော်မတီများ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်လမ်းညွှန်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားမည်။ နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေပါ dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး, DutchtownSTL စာပို့စာရင်းအတွက်စာရင်းသွင်းပါနှင့်အကြှနျုပျတို့ကိုလိုကျနာ Facebook က, တွစ်တာနှင့် Instagram ကို အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်အဘို့ငါတို့သည်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်! Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကူညီပံ့ပိုးနိုင်သည်ကိုသင်၌အကြံဥာဏ်များရှိပါကလွတ်လပ်စွာခံစားရပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11th, 2021 .
ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း Google My Business - စာရင်းပြုစုခြင်းအတွက် Dutchtown လမ်းညွှန်